'मेरो पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आयो' - Mahendranagar Post
बैंक तथा वित्तीय समाचार
पर्यटन प्रवद्धर्नका लागि कस्या टाकुरी सिँगारिँदै
गाउँका बाटा बनाउँदै टीकापुरका युवा
छोरोको कुटपिटबाट आमाको मृत्युु
किसानको पिरलोः पोखरी छ, पानी छैन
प्रधानमन्त्री र ‘रअ’ प्रमुख भेट राष्ट्रिय सुरक्षामा खतराः गगन थापा
मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव फेल
बाजुरामा कोरोनाको कहर बढ्दै, पार्टी प्रवेश गराउनमा मन्त्री शाहलाई भ्याईनभ्याई
Allअटोबैंक तथा वित्तीय समाचाररोजगारी सुचनाविकास निर्माणसुन चांदी
खसीबोका बिक्री नहुँदा चाडपर्वमा खर्च जुटाउन मुश्किल
कैलाली र कञ्चनपुरका नौ उद्योग कारवाहीको दायरामा
माछापुछ्रेको काँखमा सैपालका च्याङग्रा
रोल्पाको लिवाङमा प्रभु बैंक
यो यात्रा रमाइलो
‘सेनाको इतिहास जति गर्विलो छ, वर्तमान उत्तिकै भरपर्दो’
‘धिरेन्द्र सरकार’को त्यो आदेश
‘मेरो पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आयो’
पुतली सडकमा पारसको गाडीमा स्टिकर लगाउँदा…
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीबाट अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक सम्पन्न
नागरिकलाई प्रहरीले गर्ने व्यवहार न्यायिक र निष्पक्ष हुनुपर्छ : आईजीपी
महामारी नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारीमा जुट्न प्रधानसेनापतिको निर्देशन
सहिद गोबिन्द गौतमले सहादत दिएको भूमिमा सशस्त्रको बिओपी
मुकेश चौरासियाको हत्यामा संलग्नलाई कडा कानुनी कारवाही गर्न अध्यक्ष दाहालकाे माग
सिकालीको प्रसाद प्रधानमन्त्रीलाई
सरकारले भन्यो,‘खर्च व्यहोर्न नसक्ने संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नू’
नेपालमा थप २ हजार ८ सय ५६ जनामा कोरोना संक्रमण
आईपीएल: हैदराबादविरुद्ध पञ्जाबको रोमाञ्चक जित
तेघरीमा सम्पन्न खुला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि एलवाईसीले जित्यो
धनगढीमा तेक्वान्दो खेलाडीहरु सम्मानित
आईपीएल :बेङ्ग्लाेरकाे सातौं जित, कोलकत्ता ८ विकेटले पराजित
आईपीएल : दिल्लीमाथि पञ्जाबकाे जित
Allअध्यात्मअन्तरवार्तागाउँघरघुमफिरपत्रपत्रिकाफोटो कथाबालसंसारमनोरञ्जनमहेन्द्रनगर टीभीवातावरणविचित्र संसारशिक्षासमाजसाहित्यस्वास्थ्य
कैलालीमा २ किशोरीमाथि सामुहिक बलात्कार, ८ जना पक्राउ
कैलालीको कान्द्रा नदीमा डुवेर दुई बालिकाको ज्यान गयो
सेतीको परीक्षणमा थप १२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि (अपडेट)
बझाङमा कोरोना संक्रमणबाट गाडी चालकको मृत्यु
Home बिचार ‘मेरो पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आयो’
अशोज २३, २०७७
सहयोग, ऐक्यवद्धता र शुभेच्छाको लागि सबैमा हार्दिक आभार !
कोरोनाको अनुभव व्यक्ति–व्यक्तिमा फरक–फरक छ। कोही लक्षण सहितको संक्रमित हुनुहुन्छ। उहाँहरुको अनुभवले भन्छ– यसले पीडा दिन्छ, गाल्छ। ज्यानै गए अन्तिम अवस्थामा आफन्तहरुले मुख समेत हेर्न पाउँदैनन् । कोही लक्षण बिनाको संक्रमित हुनुहुन्छ । हप्तारदश दिनमा भाइरस मुक्त ! उहाँहरुको अनुभवमा कोरोना त केही नै हैन रहेछ ! पानी/सानी खायो–खलास् !!!
म पनि कोरोना संक्रमित भएँ । सतर्क रहँदा रहँदै पनि कसरी संक्रमित भएँ? केवल अन्दाजै मात्र छ। लक्षण बिनाको संक्रमित– पहिलो दिन अलिअलि चिन्ता लाग्यो। आफ्नो भन्दा पनि आफ्नो परिवारका सदस्यको। संवेदनशील स्थान भएकोले, आफूले काम गर्ने ठाँउको र होम आइसोलेशनमा रहेकोले छरछिमेकको …। मनमा आयो– अब के होला? अरुहरुले के सोचि रहेका होलान्? कसैलाई केही भइहाले म कति दोषी ठहरिउँला? आदि।
सिङ्गो अवधि भरी केही पनि अप्ठ्यारो महशुस नगरी मैले आइसोलेशनको अवधि आज पार गरें। दोश्रो चोटीको पिसिआर परिक्षणबाट परिणाम “नेगेटिभ” आयो । खुशी लाग्यो, म कोरोना मुक्त भएँ।
मेरो अनुभवले भन्छ– कोरोना केही होइन भन्नु अतिरञ्जना हो। र, कोरोना लागेपछि सिद्दियो भन्नु त झनै उत्तेजनापूर्ण अफवाह हो। तरीका पुर्याउँदा यो महामारीको असर अतिन्यून हुन्छ। लापर्बाहिमा ज्यानै जान्छ। त्यसैले यस महामारीले पहिलो कुरा, अनुशासनको माग गर्छ। दोश्रो, संक्रमितको उच्च मनोबल र तेश्रो धैर्यताको माग गर्छ।
यस्तो बेलामा आउने सल्लाह र सुझावहरु पनि रंगिविरङ्गी हुन्छन्। मन आत्तिएको बेला आएजति सबै सल्लाह पालन गर्छु, भने जति सबैथोक खान्छु भन्नेतिर लागियो भने भद्रगोलमा परिन्छ। त्यसैले, चिकित्सकीय वा अन्य कुनै पनि सल्लाह, जसमाथि बढी विश्वास छ, उसैको सुझाव फलो गर्नुहोस्। खाल–खालको सुझावको पछि नलाग्नुस्। मेरो विचारमा, विश्वास– अप्ठ्यारोबाट पार पाउन महत्वपूर्ण आधार हो।
मैले किर्तिपुर आयुर्वेदिक अस्पतालका डा. रामआधार यादवले सुझाउनु भएको आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग गरे । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रबीन्द्र पाण्डेले दिनुभएको सुझावलाई अपनाएँ। हामी खिसिट्युरी गर्न मज्जा मान्छौं। तर पत्याउनु हुन्छ? मैले त त्यही बेसार, कागती, गुर्जो, अदुवा सहितको पानी प्रसस्त पिएँ। राष्ट्रका अति सम्मानित व्यक्तित्वदेखि विभिन्न तह र तप्काका मलाई माया गर्नुहुने आदरणीय शुभेच्छुकहरुले “छिट्टै निको हुन” दिनुभएको शुभकामनालाई आड भरोसाको रुपमा लिएँ। म मा अरु रोग केही थिएन। दुई चिकित्सकहरुले सुझाउनु भएको उपायले मज्जाले काम गर्यो।
एउटा रमाइलो गरौं? संक्रमणको दोश्रो दिन लेखकरपत्रकार विजय कुमारले फोन गरेर भन्नु भयो– बधाई ब्रदर। मैले सोधें– कुन खुशीमा? उहाँले भन्नु भयो– २ ÷४ दिनमा तपाई ठीक हुनुहुनेछ। त्यसपछि अरु असंक्रमितहरु भ्याक्सिन खोज्दै यताउता भौंतारिने छन्। तपाई आफ्नै शरीरमा पैदाभएको ‘एण्टीबडी’को बलमा ४÷६ महिना शानसंग काम गर्न पाउनु हुनेछ। अहिले आराम गर्ने, मेरो किताब– सम्बन्धहरु, पढ्ने ब्रो। मन चङ्गा भयो– कोरोना सल्केर निको भएपछि त काइदाको फाइदा पो हुने रहेछ।
लक्षणयुक्त होस् या लक्षण बिहिन, कोरोन मुक्त भएपछि के के नै लडाईँ जिते जस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ। यस्तो बेलामा सतर्क हुनुपर्ने केही कुरा छन्। जस्तो कि निको हुनेले फुर्तिफार्ती गर्दै ‘मलाई त केही नै भएन, ह्या केही हुँदो रहेनछ, कोरोना न सोरोना … जस्ता हल्का टिप्पणी नगर्नुस्। केही नै नहुने त किन हुन्थ्यो र? कम्तिमा पनि अलि कमजोरी त फिल हुन्छ हुन्छ। महामारीको संक्रमणलाई सामान्यकृत गर्दा अनुशासन भत्किन्छ र त्यसले अनपेक्षित दुस्परिणाम निम्त्याउँछ भन्ने हामी कसैले पनि भुल्न हुँदैन।
आज आफू कोरोनामुक्त हुँदा देशभरका सबै सक्रिय संक्रमित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई मेरा यी अनुभव भन्न चाहन्छु। र, उहाँहरु सबैको शीघ स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। जो जसले यसअघि नै कोरोना विरुद्धको लडाईं जितिसक्नु भयो, उहाँहरु सबैलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। जसलाई पापी कोरोनाले जित्न दिएन, उहाँहरुप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु।
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरु, अग्रभागमा रहेर जीवन जोगाउन अहोरात्र खटी रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावप्रति आदरसम्मान व्यक्त गर्दछु। शीघ्र स्वास्थ्यलाभको शुभेच्छा सहित, परिबारका सदस्य झैं मेरो स्वास्थ्यप्रति चिन्तित हुनुहुने सबै आदरणीयहरुमा विनम्र आभार व्यक्त गर्दछु।
म त यस महामारीबाट हाललाई उम्किएँ, तर महामारी अझै फैलिँदो अवस्थामा छ।
आग्रह गर्न चाहन्छु– सतर्क होऔं, अनुशासित बनौं।
चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुझाव पालना गरौं।
कोरानाबाट आफू बचौं र अरुलाई पनि बचाऔं।
विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार हुन्।
Previous articleसुदूरपश्चिममा ९० हजार २ सय ४ जनाको स्वाव संकलन, ८१ हजार १ सय १२ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ
Next articleकञ्चनपुरका जनप्रतिनिधिद्वारा पारिश्रमिक खर्चेर स्वास्थ्यचौकीमा खानेपानी
समाज महेन्द्रनगरपोष्ट - कार्तिक ९, २०७७ 0
कैलाली-कैलालीमा २ किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। जिल्लाको जानकी गाउपालिका वडा नम्बर ५ मा १३ र १४ वर्षीया किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको...
देश महेन्द्रनगरपोष्ट - कार्तिक ९, २०७७ 0
काठमाडौं-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुकेश चौरासियाको हत्यामा संलग्नलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।...
समाचार महेन्द्रनगरपोष्ट - कार्तिक ९, २०७७ 0
डोटी-दशैँका समयमा यहाँका प्रमुख बजार दिपायल, पिपल्ला र राजपुरमा चहलपहल बढेको छ ।कोरोना सङ्क्रमणका कारण स्थानीय प्रशासनले बढी भीडभाड नगर्न आग्रह गरेपनि...
Mahendranagar Post Mahendranagar Post
महेन्द्रनगर पोष्ट राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज, अपराध, विचार र मनोरञ्जनका समष्टिगत जानकारी दिने डिजिटल पत्रिका हो । कुनै ठाउँ विशेषको नाम रहे पनि विश्वभरी छरिएका नेपाली भाषी पाठकका निम्ति खोज खबर पस्किने यसको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व हो । पत्रकारिताका नयाँ र नवीन आयामलाई पछ्याउँदै जनतामाझ सूचनाको पोको पन्त्यौरो खोली सुसूचीत गराउने, जनमानसको आवाजलाई बोक्ने लक्ष्य यस डिजिटल पत्रिकाले लिएको छ । व्यावसायीक, जनउत्तरदायी सञ्चारकर्म यस डिजिटल पत्रिकाले कालान्तरसम्म पनि कायम राख्नेछ ।
© अक्सफोर्ड मिडिया प्रालीद्धारा प्रकाशित अध्यक्ष रवि धामी, सम्पादक राजेन्द्र नाथ सुचना विभाग दर्ता नम्वर : १८९६ ०७६ ७७ मुख्य कार्यालय : भिमदत्त १८ महेन्द्रनगर कञ्चनपुर